Tababaraha Manchester City Pep Guardiola oo dhigay rikoorkii abid ugu fiicnaa ee Taariikhda Manchester City
Home Horyaalka Ingiriiska Tababaraha Manchester City Pep Guardiola oo dhigay rikoorkii abid ugu fiicnaa ee...
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa dhigay rikoor cusub ka dib guushii 2-1 ay ka gaareen West Ham United.
Macalinka reer Spain ee aan la joojin karin ayaa u dhaqaaqay guushiisii 20aad oo xiriir ah tartamada oo dhan inta uu ka horyimid Kooxda West Ham United.
Guushii Sabtidii ayaa muujisay guushii 200-aad ee Guardiola oo ah tababaraha Man City kulankiisii ​​273-aad ee uu maamulo – waa waqtiga ugu yar ee uu maamule koox ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee Ingiriiska.
Intaa waxaa sii dheer, 50 jirkaan ayaa haatan soo hooyay guushii 500 aad ee xirfadiisa maamul kadib markii uu si qurux badan uga soo qaatay Barcelona iyo Bayern Munich ka hor inta uusan u dhaqaaqin City 2016.
Kooxda weyn ee Manchester – oo sidoo kale laga badinin 27 kulan iyagoo haatan 13 dhibcood ku hogaamineysa hogaanka Premier League iyagoo ciyaaray 26 kulan.
Previous articleBarcelona oo war kasoo saartay dhaawicii soo gaaray Pedri.
Next articleArsenal oo guul ka gaartay Kooxda Leicester City Xili uu maqnaa Aubameyang